Musharaxa Madaxweynaha Barcelona Farre Oo Rashford Keeni Doona Camp Nou Hadii Loo Doorto Kooxda
HomeSuuqa kala iibsigamusharaxa madaxweynaha Barcelona Farre oo Rashford keeni doona Camp Nou hadii loo doorto kooxda
December 23, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Musharaxa madaxweynaha Barcelona Jordi Farre ayaa shaaca ka qaaday in Marcus Rashford uu noqon lahaa ciyaaryahan uu raadinayo inuu la soo saxiixdo hadii uu ku guuleysto doorashada kooxda reer Catalan.
Tan iyo markii loo codeeyay madaxweynihii hore Josep Maria Bartomeu, musharixiinta cusub ee doorka ayaa soo muuqday, mid walbana wuxuu leeyahay qaabkiisa u gaarka ah ee ololaha, wuxuu balan qaadayaa waxyaabo kala duwan wuxuuna qeexayaa bartilmaameedyadooda suuqa kala iibsiga.
Farre ayaa rumeysan in aagagga weerarka ay ku sameyn karaan xoojin midkood bisha Janaayo ama xagaayga, wuxuuna soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin ciyaartoy uu jecel yahay in ay u muuqdaan, oo uu ugu horreeyo Raul de Tomas oo u ciyaara Espanyol.
“Eeg, waxaa jira mid aan jeclaa muddo dheer shalayna wuxuu dhaliyay gool aad u fiican. Ma aanan arkin laakiin waxay ii sheegeen inay cajiib tahay inuu yahay Raul de Tomas [reer Espanyol], ”ayuu Farre u sheegay 90min.es , isagoo tixraacaya dadaalka khadka dhexe ee De Tomas ee kulankii ay guusha ka gaareen Almeria.
“Waxaan u maleynayaa inuu yahay ciyaaryahan waxyaabo badan oo guul ah heysta – wuxuu qabaa dhibaatooyin dhaawacyo ah laakiin sidoo kale waxaan jeclahay [Erling] Haaland, Raul de Tomas, Rashford – sidoo kale waan jeclahay. Waxaan u maleynayaa inay jiraan ciyaartoy aad u xiiso badan. ”
Farre wuxuu sii wadaa inuu mar kale xusho Rashford, isagoo sheegay inuu ka mid yahay ciyaartoyda uu aadka u jecelyahay xilligan.
“Rashford waa mid ka mid ah ciyaartoyda aan ugu jeclahay adduunka ,” ayuu raaciyay.
Inkastoo United ay dhibtootay mararka qaar xilli ciyaareedkan, hadana waxa ay badisay lix ka mid ah toddobadii kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka iyagoo u dhaqaaqay kaalinta seddexaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Rashford wuxuu leeyahay 12 gool, afarna wuu caawiyay 17 kulan oo ku soo bilowday ilaa xili ciyaareedkan 2020/21.